Salaad Cali Jeele “Waxaa runtii wax laga xumaado ah in guddigii loo igmaday doorashada uu yiraahdo..” – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Salaad Cali Jeele “Waxaa runtii wax laga xumaado ah in guddigii loo igmaday doorashada uu yiraahdo..”
Salaad Cali Jeele oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo wareysi siiyay mid ka mid ah warbaahinta Muqdisho ayaa sheegay in hadii ay dalka doorasho ka dhici weyso waqtigii hore ee loogu talo-galay in Odayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta iyo waxgaradka Soomaaliyeed ay taladda dalka la wareegi doonaan, maadaama waqtiga dowladda uu sii dhamaanayo.
Wuxuu Salaad Cali Jeele tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku fashilantay hir-gelinta waqtigii loogu tala galay in dalka doorasho ka dhacdo, waxaana uu intaas ku daray siyaasigaan in waqti xaadirkaan aaney dalka ka muuqan ifi-faalo doorasho xilligii doorashadana la joogo.
“Runtii waa wax laga xumaado in guddigii loo igmaday doorashada uu yiraahdo ma sheegi karo waqtiga ay dhaceeyso doorashada, waana mas’uuliyad darro weyn aan loo dulqaadan karin” Sidaasi waxaa yiri Salaad Cali Jeele.
Salaad Cali Jeele ayaa dhinaca kale sheegay in qorshaha doorashada uu ahaa in 20-ka bishaan August la dhaariyo xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Soomaaliya, balse aysan taasi haatan muuqan.
Dhinaca kale, guddiga hir-gelinta doorashooyinka dadban ayaa dhawaan ku dhawaaqay in aysan shaacin karin waqtigaan xilliga doorashada Soomaaliya balse ay dib ka sheegi doonaan, iyadoona qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ay walaac xoogan ka qabaan inay doorashada sanadkaan xilligii loogu tala-galay ku dhacdo.